Myanmars get the ဒေါင်း “Peacock-culture” from Indian Kalars | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMyanmars get the ဒေါင်း “Peacock-culture” from Indian Kalars
Myanmars get the ဒေါင်း “Peacock-culture” from Indian Kalars
May 1, 2015 May 3, 2015 drkokogyi
M. Aye Lwin
တရုတ်ကျောထောက်နောက်ခံ နဲ့ မဘသက အသစ်ဖွဲ့တဲ့ပါတီများလားဗျာ…????
ပါတီ နာယက…..သမ္မတကြီး၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး
( အငြိမ်းစား) ဒေါက်တာ နေဇင်လတ် (RACIST BIGOT Admission)
Swe Mon added2new photos.
လိုဂိုကိုတောင် ခွင့်မတောင်းဘဲ တိုက်ရိုက်ကြီး ကော်ပီယူထားတာကိုး။
ဒေါင်းပုံကို မူရင်းပိုင်တဲ့ ဟိုကုမ္ပဏီက ကော်ပီရိုက်နဲ့ တရားစွဲရင် ဦးနေဇင်လတ်ကြီး ဂွမ်းတော့မှာပဲ။
အထင်ကြီးစရာ ကုန်ရော။ သိတဲ့လူတွေ ပြောကြစမ်းပါဗျာ။ copy rights နဲ့ မိမှ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး သောက်ရှက်လုံးလုံး ကွဲကြတော့မယ်လို့။
အဲဒီပါတီလိုဂို မူရင်းက ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ပြူးနေအောင် ရှိနေတယ်ဗျာ။ အရောင်လေးပဲ ချိန်းထားတာ။
လူသိမများခင် ကပ်တိုးလေး လိုဂိုချိန်းကြပါဦးလို့ ပြောကြစမ်းပါဗျာ။
KKG >>>They are thieves…Now they took the British Burma Flag @ https://www.facebook.com/MyanmarNationalParty/photos/a.357524911118611.1073741827.355937024610733/357524841118618/?type=1&theater
Look @ this pic from Wikipedia
Taken from British India Flag…They are yearning to go back to colonial times as COMBINED INDIA-BURMA…British India…
So this party is keeping on to steal from others for their LOGO. Just madealogo fromadragon as Nay Zin Latt isaBurmese-Chinese..
ဟဲ့ကောင် နင် သမဒ အကြံပေးကထွက်
အမျိုးသားရေး အမျိုးသားရေး များများအော်
နင့် ဖာခန်းက ကြက်မလေးတွေကို
ပါတီ ပရိုမိုးရှင်း လုပ်ခိုင်း
ခါကျက်ဥ ဆယ့်နှစ်လုံးကို ထည့်ထားတယ်
ဒါ မုန်လာဥ လုပ်ချင်တဲ့သဘော
တံဆိပ်ကိုက မရိုးသားတာ ဟွင်းဟွင်း
Al Khon Bransai ခါကျက်ဥ carrot လေဗျာ အရွက်လေး နှစ်ခုတောင် ထောင် လို့
Mayhnin Yeesaing ကိုဗြန်ပြောတဲ့ဥနဲ့လည်းတူတယ်
M. Aye Lwin ဒီလိုဒေါင်းမျိုးက ရှေ့ကကြည့်ရင်လှပြီး နောက်ကဖင်ပေါ်နေတာလို့ လူကြီးတွေပြောကြတာပေါ့
Saw Sai ဒေါင်းတောင်များသာမက…. ကျီးတောင်များပါ … ကျွတ်ကျကုန်၏ …
Ko Pyauk ရွှေကာဒေါင်းလေးပါလား
” သွားပါပြီဗျာ…ဒေါင်းတံဆိပ် ခွေးကိုက်ခံရပြန်ပြီ …တောက်..ခွေးမသားတွေ ”
( အငြိမ်းစား) ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်
ပါတီဖွဲ့စည်းမှု. …လူမှုစီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ
ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် နိုင်ငံရေး မဟာသိပ္ပံကျောင်းသား
များနှင့် နာမည်ပျက်မရှိသည့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအချို့
များတိုးတက်ပြီး ခေတ်မီတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့်
CD….Nyan lin oo
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ရွှေရောင်ကဒေါင်း တို့ လာပြီလေ……
Thet Ko Ko>>> ဒေါင်းပုံကနေမထွက်နိုင်သေးဘူး ကျောင်းသားလည်းဒေါင်း ဒီမိုလည်းဒေါင်း ၈၈လည်းဒေါင်း အမျိုးသားရေးလည်းဒေါင်း
Note:Myanmar Flags are taken from Wikipedia.
Flag of the Third Burmese Empire under the Konbaung dynasty (1752–1885)
Flag of British Burma asapart of British India (1824–1937) (Below)
Flag of British Burma asaseparate colony (1939–1941, 1945-January 3, 1948) (Above)
Flag of British Burma (1941-1942) (Below)
The Peacock, Pavo cristatus (Linnaeus), is the national bird of India. It isasymbol of grace, joy, beauty and love. Peacock isalarge and majestic bird. Peacock isacolorful, swan-sized bird withafan-shaped crest of feathers on its head,awhite patch under the eye andalong-slender neck
The male of the species is more colorful than the female withaglistening blue breast and neck andaspectacular bronze-green tail of around 200 elongated feathers. The female is brownish, slightly smaller than the male and lacks the tail. Peacock occupiesarespectable position in Indian culture and is protected not only by religious sentiments but also by parliamentary statute. It is fully protected under the Indian Wildlife (Protection) Act, 1972.
The significance of peacock is attached to cultures of India, Far East, Ancient Persia, Greek and Christian. In Hinduism, the image of the god of thunder, rains and war, Indra, was depicted in the form ofapeacock. In south India, peacock is considered asa‘vahana’ or vehilce of lord Muruga. The figure of peacock is painted in various Islamic religious buildings. In Christianity, the peacock was also known as the symbol of the ‘Resurrection’.
‘Peacock in Hindu mythology’
For other uses, see Mayura (disambiguation).
Mayura (a Kannada word for peacock ) is one of the sacred birds of the Hindu mythology. It is referred to inanumber of Hindu scriptures. It is alsoacontemporary Hindu name used in many parts of India.
The legend states that the Mayura was created from the feathers of Garuda, another semi-divine mythical birds of Hindu mythology. Garuda is believed to beavahana (conveyance) of Vishnu, one of the Trimurti. In images of the mayura asamythical bird, it is depicted as killingasnake, which according toanumber of Hindu scriptures, isasymbol of cycle of time.
Mayura is associated withanumber of gods and deities of the Hindus including the following:
Goddess Kaumari is generally depicted withamayura and mayura also serves as her conveyance.
A mayura also serves asaconveyance of the god Kartikeya.
Krishna is generally depicted with peacock feathers adorning his head.
In general, feathers of mayura are considered sacred and are used to dust the religious images and implements of Hindus.
Symbolic Meaning of Peacocks
I trust this information on the symbolic meaning of peacocks helps you on your path.
Here isakeyword quick-list of peacock symbolism…
Ashin Pan with Ah Phu Phu and 20 others
Yesterday at 1:52pm ·
ဦးနေဇင်လတ်　ထောင်မယ့်　ပါတီသစ်
အင်း…လိုရင်းပြောရရင်တော့　ရွေးကောက်ပွဲ　ရှုံးမယ့်　ပါတီပဲ။　ဘာလို့ဒီလို　ပြောရသလဲ　ဆိုတာတော့　နဲနဲ　အကျယ်ချဲ့ဖို့　လိုမယ်။
ဦးနေဇင်လတ်တို့ဟာ　လက်ရှိအာဏာရပါတီနဲ့　အဓိက　အတိုက်အခံပါတီကြီး　ဖြစ်တဲ့　NLD တို့ကို　ကြည့်ပြီး　”ဒီပါတီတွေက　လူများစုပါတီဝင်တွေက　capacity နိမ့်တယ်။　ငါတို့ဆီမှာ　ရှိတဲ့　မဟာတန်းပြီးတော့မယ့်　ကျောင်းသားတွေက　ဘာပြောပြော　capacity သူတို့ထက်　သာတယ်။　ဒီလို　အရည်အသွေးမြင့်သူတွေနဲ့　ပါတီထောင်၊　ရွေးကောက်ပွဲ　ဝင်လိုက်ရင်　အခြေအနေ　ကောင်းလောက်မယ်”　လို့　တွေးပြီး　ပါတီသစ်　ထောင်ပုံ　ရပါတယ်။
သူတို့ထင်သလို　တကယ်ပဲ　capacity မြင့်နေပြီပဲ　ထားပါဦး၊　ဘာလို့　ရှုံးမယ်လို့　ဟောကိန်းထုတ်ရသလဲ။
ဥပမာတခု　ပေးပါ့မယ်။　အိန္ဒိယက　အခု　အဓိက　အတိုက်အခံပါတီကြီး　ဖြစ်နေတဲ့　ကွန်ဂရက် ပါတီကိုကြည့်။　ပါတီ　ခေါင်းဆောင်　အဆက်ဆက်　ဆိုတာ　ပထမ　နေရူး၊　နောက်　သူ့သမီး　အင်ဒီရာ　ဂန္ဒီ၊　နောက်　မြေးဖြစ်တဲ့　ရာဂျစ်　ဂန္ဒီ၊　ရာဂျစ်　လုပ်ကြံခံရလို့　သေတော့　မြေးချွေးမ　ဖြစ်တဲ့　အီတလီသူ　ဆိုနီယာ　ဂန္ဒီ၊　နောက်　မြစ်တွေ　ဖြစ်တဲ့　ရာဟူးလ်　ဂန္ဒီ　စသဖြင့်　ဖြစ်ခဲ့ကြတာ၊　နေရူးမင်းဆက်လို့တောင်　တင်စားလို့　ရလောက်တယ်။
ဒီနေရာမှာ　မေးစရာ　ရှိတာက　အဲဒီမိသားစုက　မွေးတိုင်း　နိုင်ငံခေါင်းဆောင်　ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်　တော်မှာလား၊　တတ်မှာလား　ဆိုတဲ့　မေးခွန်း။　ဒါကတော့　ရှင်းပါတယ်။　နေရူးမျိုးဆက်　ဖြစ်တိုင်း　ဘယ်တော်နိုင်ပါ့မလဲဗျာ။　တော်သူ　ရှိသလို　သာမန်အဆင့်၊　ခပ်ချာချာ　အဆင့်တွေလဲ　ရှိမှာပါပဲ။　သူတို့ထဲက　ရာဂျစ်ဂန္ဒီဆိုရင်　နိုင်ငံရေး　ဝါသနာ　မပါလို့　လေယာဉ်မှူးလုပ်နေတာ၊　သူ့အမေ　တကယ်မျှော်မှန်း ထားတဲ့　သူ့ညီ ဆန်ဂျေးဂန္ဒီက　လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး　ဆုံးသွားလို့　နိုင်ငံရေးထဲ　ဝင်ပြီး　ပါတီကို　ခေါင်းဆောင်ရရှာတဲ့လူ။　ဒါပေမယ့်　ဘယ်သူပဲ　ပါတီခေါင်းဆောင်　တက်လုပ်လုပ်၊　ပါတီထဲက　နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ　အင်မတန်　ပြည့်ဝထူးချွန်တဲ့　သူတွေက　လက်တွဲခေါ်တဲ့အတွက်　သူတို့အလုပ်ကို　ပီပြင်အောင်　လုပ်သွားနိုင်ကြတာပဲ။
ဒီနေရာမှာ　မေးစရာ　ရှိပြန်တာက　အဲဒီလို　အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ထူးချွန်တဲ့　သူတွေ ကိုယ်တိုင်　ဘာလို့　ပါတီခေါင်းဆောင်　မဖြစ်လဲ　ဆိုတဲ့　မေးခွန်း။　နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဆိုတာ　တော်ရုံ၊　တတ်ရုံနဲ့　မပြီးဘူးဗျ။　ကိုယ့်အပေါ်　ပြည်သူလူထုက　ချစ်ခင်လေးစားအောင်　နေနိုင်တဲ့၊　ပြည်သူကို　ကိုယ့်နောက်ပါအောင်　ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့　အရည်အချင်း　ရှိဖို့လဲ　လိုသေးတယ်။　နာမယ်ကြီး　မျိုးရိုးက　ဆင်းသက်လာလို့ပဲ　ဖြစ်စေ၊　အသက်ငယ်ရွယ်　ချောမွေ့လို့ပဲ　ဖြစ်စေ၊　(ဟစ်တလာတို့လို)　နားထောင်သူ　ကြက်သီးမွေးညင်းထလောက်အောင်　အပြောကောင်းလို့ပဲ ဖြစ်စေ…　ဘယ်လို　အကြောင်းနဲ့　ဖြစ်ဖြစ်　ပြည်သူကို　ကိုယ့်နောက်က　လိုက်လာအောင်　ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း　ရှိမှသာ…
(၁)　ရွေးကောက်ပွဲ　နိုင်နိုင်တယ်
(၂)　ရွေးကောက်ပွဲ　နိုင်လို့　အာဏာရပြီးတော့လဲ　ပြည်သူအပေါ်　ကိုယ့်　သြဇာတည်မယ်။
အဲသလို　ပြည်သူအပေါ်　သြဇာတည်မှလဲ　တိုင်းပြည်ကို　တကယ်　တိုးတက်အောင်　လုပ်နိုင်မယ်။
အဲသလို　ပြည်သူကို　ကိုယ့်နောက်က　ပါအောင်　ခေါ်နိုင်တဲ့　စွမ်းရည်ကို　နိုင်ငံရေး စန်းလို့　ခေါ်ပါတယ်။　တော်တိုင်း၊　တတ်တိုင်း　စန်းပွင့်ချင်မှ　ပွင့်တာပါ။　အဲသလို　စန်းမရှိတဲ့　သူတွေဟာ　ဘယ်လောက်　တော်တော်၊　ကန့်လန့်ကာ　နောက်ကွယ်မှာနေပြီး　မင်းလောင်းရှာရတဲ့၊　တွေ့တဲ့　မင်းလောင်းကို　ဘိသိက်သွန်းပြီး　နန်းတင်ပေးရတဲ့၊　နန်းတက်ပြီးတဲ့　ဘုရင်ကို　အကြံပေးရတဲ့　king maker တွေသာ　ဖြစ်ရပါတယ်၊　ကိုယ်တိုင်　ဘုရင်　မဖြစ်ပါဘူး။
အခုလဲ　ဒီအတိုင်းပဲ။　ဦးနေဇင်လတ်တို့　ပါတီဝင်တွေ　ဘယ်လောက်တော်တော်၊　နိုင်ငံရေး　တကယ်　စန်းပွင့်သူတဦးကို　ခေါင်းဆောင်တင်နိုင်မှသာ　လာမယ့်　ရွေးကောက်ပွဲမှာ　မျှော်လင့်ချက်　ရှိမှာ　ဖြစ်ပါတယ်။　နိုင်ငံရေး　စန်းပွင့်တဲ့ နေရာမှာ　ဒေါ်စုကို　ယှဉ်နိုင်တဲ့　ခေါင်းဆောင်မျိုးကို　ဘယ်နေရာမှာ　သွားရှာမလဲ။
ဒါကြောင့်　ဒီပါတီသစ်　ရွေးကောက်ပွဲ　ရှုံးမယ်လို့　ဟောကိန်းထုတ်ရတာပါ။　(အစိုးရကိုယ်တိုင်က　မဲခိုးပေး၊　မဲလိမ်ပေးရင်တော့　တမျိုးပေါ့နော　grin emoticon )
← Thanks my parents, grand parents and relatives for pulling me away from BSPP Propaganda mirage bait
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မှာက…နေပြည်တော်က .ပြည်သူ့လွှတ်တော်. မဟုတ်ဘူး ပန်ဆန်းက…(ဝ+၈) ဆွေးနွေးပွဲခန်းမကြီး…ဖြစ်သွားနိုင်တယ်. →
5 thoughts on “Myanmars get the ဒေါင်း “Peacock-culture” from Indian Kalars”
ဒေါင်း ၁ကောင်+အမြီးကွက် ၇၅+ခါဂျက်ဥ ၁၂= ၈၈ = ?
The Peacock Throne (Sanskrit: मयूरासन: Mayūrāsana, Urdu: تخت طاؤس, Persian: تخت طاووس‎, Takht-i Tāvūs) wasafamous jeweled throne that was the seat of the Mughal emperors that conquered Northern India. It was commissioned in the early 17th century by emperor Shah Jahan and was located in the Red Fort of Delhi. The original throne was subsequently captured and taken asawar trophy in 1739 by the Persian king Nader Shah, and has been lost ever since. A replacement throne based on the original was commissioned afterwards and existed until the Indian Rebellion of 1857.READ ALL HERE AT THE SOURCE @ http://en.wikipedia.org/wiki/Peacock_Throne
Page: 1234567 8910 Page 8
he Naderi Throne
There are three thrones located in Tehran. The Sun Throne (also known as the Peacock Throne) and the Marble Throne both consist ofalarge, raised platform upon which the King would kneel.
The third throne, pictured here, is known as the Naderi throne. Chair-like thrones like this were used in ancient Iran by Achaemenid dynasty in the 5th century BC, as well as the 17th century Safavid dynasty.
Historians believe that Nader Shah, upon returning from his campaigns in India in 1739, brought nine jewelled thrones in addition to the Mughol Peacock Throne to Iran. It is further reported by Malcom (History of Persia, vol. II, p.37) that Nader Shah was so fond of the famous Peacock Throne that he had an exact duplicate made, using other gems from the treasury. However, today there is no trace of any of these thrones, and historians unanimously agree that they were destroyed after the death of Nader Shah in 1747. – See more at: http://www.iranchamber.com/museum/royal_jewels/national_iranian_jewels08.php#sthash.NODpT1Bk.dpuf
Stock Photos, Images & Video Footage by Dreamstime
They are thieves…Now they took the British Burma Flag @ https://www.facebook.com/MyanmarNationalParty/photos/a.357524911118611.1073741827.355937024610733/357524841118618/?type=1&theater
This is from Wikipedia @ https://upload.wikimedia.org/…/c/cd/Flag_of_Burma_1941.svg